cast acrylic sheet Vagadziri & Vatengesi - China cast acrylic sheet Factory
Kanda acrylic jira PMMA chibereko cheasingaite mhando, yakasarudzika kugona uye kwakatanhamara kuita. Kanda acrylic jira inogadzirwa yakananga kubva kune monomer nenzira mbiri: sero kukanda uye kuenderera kukanda.
UV acrylic jira
CAST Acrylic Sheets -inowanikwa mune Yakajeka, Nhema, Ichena, Grey, Bronze, Bhuruu, Dzvuku, Yero, Girini uye nezvimwe. Acrylic kunyorera kunosanganisira: mapikicha emifananidzo, zvitoro zvinoratidzwa, fanicha, masherufu, windows, zvipingaidzo, nhoo, girazi rinotsiva uye aquariums.
Fekitori yedu ine makore gumi nemana + zviitiko maererano nekugadzira uye kutumira kunze. Kugutsikana kwedu kwemusika wechigadzirwa kwakakwirira kupfuura 95% neSGS, CE, ISO chitupa. Isu tinotarisa pane yepamusoro acrylic girazi jira. Nezve iyo hukobvu uye kuwanda, kutarisisa kwehunhu kudzora uye basa rakanaka kune vatengi vedu.